Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Britain oo Muqdisho booqday lana kulmay Madaxda DKMG ah ee Soomaaliya | Building Momentum
Xoghayaha Arrimaha Dibadda ee Britain oo Muqdisho booqday lana kulmay Madaxda DKMG ah ee Soomaaliya
Khamiis, Feberaayo 02, 2012 (MomentMedia) − Waxaa maanta Muqdisho booqday xoghayaha arrimada dibadda ee Britain, William Hague iyo wafdi uu hoggaaminayo, iyadoo ay noqonayso booqashadii ugu horreysay oo uu mas’uul darajadan leh uu ku yimaado Muqdisho tan iyo sannadkii 1992-kii.
Xoghayaha arrrimaha dibadda ee Britain oo la kulmay madaxweynaha Soomaaliya, Sheekh Shariif ayaa qodobbadii uu kala waxaa ka mid ahaa shirka London iyo isagoo sheegay in dowladdiisu ay mudnaanta siinayso dhameystirka qorshe howleedka looga baxayo xilliga KMG ah.
“Waxaan ku faraxsannahay imaanshihiisa, waxaana rajeynaynaa inay caalamka kale ku dhiirrigeliso inay yimaadaan Muqdisho oo marxalad wanaagsan maraysa,” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, Maxamuud Maxamed Xaaji Ibraahim oo shir jaraa’id oo wadajir ah la qabtay xoghayaha arrimaha dibadda ee Britain.
Sidoo kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa sheegay in waxyaabihii ay kala hadleen Mr Hauge ay ka mid ahaayeen horumarinta, siyaasadda, ammaanka, shirka London oo aad looga dooday.
“Kulanka waxaa la iskula gartay in shirka London looga hadlo arrimaha guud ee dalka Soomaaliya,” ayuu yiri wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya oo shirka jaraa’id ka hadlayay.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Britain oo dhankiisa la hadlay warfidiyeenka ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu kala hadlay arrimo ay ka mid yihiin shirka London iyo safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya.
“Maanta waxaan soo gaarnay aniga iyo wafdi aan hoggaaminayo Muqdisho, waxaan kulan la yeelannay madaxda dowladda KMG ah, gaar ahaan madaxweyne Shariif, waxaana kala hadalnay shirka London ka dhacaya bisha soo socda iyo safiirka Ingiriiska ee Soomaaliya, waana isla garanay wixii aan ka hadalnay oo dhan,” ayuu yiri Mr Hauge.
Xoghayaha arrimaha dibadda ee Britain ayaa ku tilmaamay Soomaaliya dalka fashilmay ee ugu weyn dunida, kaddib dagaallo sokeeye oo ka jiray 20-sano oo xiriir ah.
“Waxay Soomaaliya u qalantaa inay hesho aayo wanaagsan kaddib 20-sano oo colaad ah oo dhibaato aan maskax-gal ahayn laga dhaxlay. Waxaa loo baahan yahay in loo helo Soomaaliya xasillooni waarta,” ayuu yiri Hauge.
Shirka London lagu qabanayo bisha soo socda ee Feberaayo dhammaadkeeda ayaa looga hadlayaa arrimaha Soomaaliya, gaar ahaan amaanka, burcadbadeedda iyo sidii dunidu ay gacan uga geysan lahayd nabadeynta Soomaaliya.
Shirka oo uu uu qabanqaabadiisa wado ra’iisul wasaaraha Britain ayaa lagu wadaa inay ka qaybgalaan ururro caalami ah oo ka socda 40-dal, iyadoo xukuumadda London ay sheegtay in shirkan uusan ahayn mid dib u heshiisiineed, balse uu yahay mid lagu raadinayo nabadda Soomaaliya.
Daawo Madaxweyne Shariif oo Villa Soomaaliya kuqaabilay Wasiirka Arimaha Dibada